Soo-dhaweynta Caan-bixiyeyaashu ma ikhtiyaar suuq-geyn ah oo macquul ah? | Martech Zone
Celebrity Endorsement ayaa had iyo jeer loo arkaa inay tahay ikhtiyaar macquul ah oo ay shirkadaha ku dhiirrigeliyaan wax soo saarkooda. Shirkado badan ayaa aaminsan in alaabtooda lala xiriiriyo caan caan ah ay gacan ka geysan doonto wadista iibka. Macaamiisha ayaa umuuqda kuwo aan hubin saameyntooda 51% iyagoo sheegaya in ogolaanshaha dadka caanka ah aysan wax faraq ah kuheynin go'aanadooda wax gadashada.
In kasta oo ROI farsamooyin badan oo suuqgeyn ah la cabbiri karo - ROI oo ku saabsan oggolaanshaha dadka caanka ah way ka adkaan kartaa tirada. Waxaa jira faa iidooyin badan oo suurtagal ah oo laxiriira ogolaansho caan ah laakiin sidoo kale waxaa jira dabinno badan oo suurtagal ah oo u baahan in si taxaddar leh loola socdo.
Dhibaatooyinkan waxaa la abuuray markii aad ku tiirsan tahay oo keliya hal caan ah si aad u dhiirrigeliso wax soo saarkaaga. Sumcadda shirkaddaada ayaa suurtagal ah inay gacanta ugu jirto hal qof oo sawirkiisu beddeli karo habeennimo sababo la xiriira fadeexad caan ah. Runtii ma mudan tahay in halistaas la sii wado?
Taas awgeed, guusha ku-meel-gaadhka dadka caanka ahi aad bay u kala duwan yihiin runtiina waa kiis dadka qaar shaqeeya iyo kuwa kale oo aan ahayn. Muhiimadda xulashada qof caan ah ayaa ugu muhiimsan si loo yareeyo halista sumcad xumida shirkaddaada. Waxaa xusid mudan in maskaxda lagu hayo in halista la xiriirta taageerida dadka caanka ah aan marnaba gabi ahaanba la burin karin, iyo ka jawaab celinta saameynta taban ee taageerida dadka caanka ah ay u baahan tahay in si taxadar leh wax looga qabto.
Infograafigani ka yimid Saxiix A Rama Toronto wuxuu ku siinayaa istaatistikada ku saabsan sida ay u aqoonsan tahay caankuhu run ahaantii, iyo sidoo kale sheekooyinka ka dambeeya guusha caanka ah ee aan guuleysan iyo kuwa aan guuleysanba sannadihii oo dhan.
Tags: beyoncebritney spearscatherine zeta jonescaan ku ahaanshaha oggolaanshaha caanka ahabaalmarinta oggolaanshaha dadka caanka ahkhatarta oggolaanshaha dadka caanka ahoggolaansho caan ahDucid beckhamDonald Trumpellen degenereskardashiansNicole Kidmannielsenoj simpsonRihannasignaramasignoramaToronto